Soosaarayaasha Faashada Caafimaadka Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaal - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Baxnaaninta iyo Jimicsiga > Faashad Caafimaad
Faashadda caafimaad waa faashado loo isticmaalo in lagu faashado nabarrada ama meelaha ay saamaysay. Waa sahay caafimaad oo caadi ah. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan iyo hababka faashadda.
Faashadda caafimaadka waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo oo lagu ilaaliyo goobta qalliinka ama dhaawaca lagama maarmaanka u ah qalliinka. Midda ugu fudud ayaa ah xarig keliya oo daadin, oo laga sameeyay faashad ama suuf, oo loogu talagalay cidhifyada, dabada, madaxa, laabta iyo caloosha. Faashado waa qaabab kala duwan oo faashado ah oo loo sameeyay si waafaqsan qaybo iyo qaabab. Maaddadu waa cudbi labanlaab ah, oo leh cudbi dhumucdiisuna kala duwan tahay oo la dhex dhigay. Xarigga marada ayaa ku hareeraysan si ay ugu xidhaan oo ay ugu xidhaan, sida faashado indhaha, faashado dhexda dhexda, faashado hore, faashado caloosha ah iyo faashado Withers. Faashado gaar ah ayaa loo isticmaalaa hagaajinta addimada iyo kala-goysyada.
Faashad caafimaad, faashad laastikada laalaabtay, faashad laastikada amylen, faashad laastikada PBT iyo faashad suuf ah oo la today, faashad malaastaan ​​ah oo viscose ah.
Faashadda caafimaadka waxa kale oo loo yaqaanaa hal cajalad, waxa jira suuf, faashad iyo cajalad laastikada ah oo saddex nooc ah, marka loo eego qaybaha kala duwan ee cajaladdu, waxa jira magacyo soo socda.
Faashada saddex xagal
Waxaa jira laba nooc oo faashado laastikada ah oo aan ugu yeerno, mid waa faashado laastikada ah oo leh clips, ka kalena waa faashad saddex xagal ah, oo sidoo kale loo yaqaan faashado laastikada ah oo is-ku dhejisan. Doorka faashadda laastikada ee isku dhejinta waxay inta badan u tahay faashadda dibadda iyo hagaajinta. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dadka isboortiga caadiga ah. Alaabtu waxay ku duudduuban tahay curcurka, canqowga iyo meelo kale, taas oo ciyaari karta door difaac ah.
Faashadda Mesh Laastikada ah
Waxaa jira laba nooc oo faashado laastikada ah oo aan ugu yeerno, mid waa faashado laastikada ah oo leh clips, ka kalena waa faashad mesh ah oo Elastic ah, oo sidoo kale loo yaqaan faashado laastikada is-ku dhejisan. Doorka faashadda laastikada ee isku dhejinta waxay inta badan u tahay faashadda dibadda iyo hagaajinta. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dadka isboortiga caadiga ah. Alaabtu waxay ku duudduuban tahay curcurka, canqowga iyo meelo kale, taas oo ciyaari karta door difaac ah.
Faashad Laalaabkii Spandex
Waxaa jira laba nooc oo faashado laastikada ah oo aan ugu yeerno, mid waa faashado laastikada ah oo leh clips, iyo kan kale waa faashad laalaab ah oo Spandex ah, oo sidoo kale loo yaqaan faashado laastikada is-ku dhejisan. Doorka faashadda laastikada ee isku dhejinta waxay inta badan u tahay faashadda dibadda iyo hagaajinta. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dadka isboortiga caadiga ah. Alaabtu waxay ku duudduuban tahay curcurka, canqowga iyo meelo kale, taas oo ciyaari karta door difaac ah.
Waxaa jira laba nooc oo faashado laastikada ah oo aan ugu yeerno, mid waa faashad laastikada ah oo leh clips, midda kalena waa faashad laalaab ah, oo sidoo kale loo yaqaan faashado laastikada is-ku dhejisan. Doorka faashadda laastikada ee isku dhejinta waxay inta badan u tahay faashadda dibadda iyo hagaajinta. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dadka isboortiga caadiga ah. Alaabtu waxay ku duudduuban tahay curcurka, canqowga iyo meelo kale, taas oo ciyaari karta door difaac ah.
Waxaa jira laba nooc oo faashado laastikada ah oo aan ugu yeerno, mid waa faashado laastikada ah oo leh clips, ka kalena waa faashad cadaadis ah, oo sidoo kale loo yaqaan faashad dhejis ah oo isku dhejisan. Doorka faashadda laastikada ee isku dhejinta waxay inta badan u tahay faashadda dibadda iyo hagaajinta. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dadka isboortiga caadiga ah. Alaabtu waxay ku duudduuban tahay curcurka, canqowga iyo meelo kale, taas oo ciyaari karta door difaac ah.
Waxaa jira laba nooc oo faashad laastikada ah oo aan ugu yeerno, mid waa faashad laastikada ah oo leh clips, ka kalena waa faashad Polymer ah, oo sidoo kale loo yaqaan faashad dhejis ah oo isku dhejisan. Doorka faashadda laastikada ee isku dhejinta waxay inta badan u tahay faashadda dibadda iyo hagaajinta. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dadka isboortiga caadiga ah. Alaabtu waxay ku duudduuban tahay curcurka, canqowga iyo meelo kale, taas oo ciyaari karta door difaac ah.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Faashad Caafimaad oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Faashad Caafimaad soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Faashad Caafimaad la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.